अब के गर्छन् सीके राउत ? – Kantipur Press
मधेसको राजनीति नयाँ डिस्कोर्समा
काठमाडौं : सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सीके राउत मधेसतर्फ लागेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा बिहीबार उनी पछिल्लो ५ महिने जेल बसाइबाट रिहा भएका थिए।
सरकारले शुक्रबार उनीसँग ‘आश्चर्यजनक’ रूपमा राजनीतिक सहमति गरेको थियो। सहमतिको भोलिपल्टै उनी आफ्नो मागमा सरकार सहमत भएको भन्दै मधेस हान्निएका हुन्। राउतको अबको योजना के छ ? सुरक्षा निकायदेखि राजनीतिक मूलधार र मधेसका आमजनताको चासोको विषय हो यो।
उनले सरकारसँग अचानक गरेको राजनीतिक सहमतिले मधेसको राजनीतिमा पक्कै केही नयाँ ‘डिस्कोर्स’ दिनेछ। मधेस केन्द्रित दलमा यसबारे बहस सुरु भइसकेको छ। सत्तारूढ दलले पनि आफ्नो भित्री तयारी गर्दै नेकपामा ल्याउँदा के होला भनेर हल्लाकै रूपमा भए पनि परीक्षण गरिसकेको छ।
कतिपयले राउत सत्तारूढ नेकपामै प्रवेश गर्ने चर्चा गरेका छन् भने केहीले मधेसलाई नै आधार बनाएर छुट्टै पार्टी बनाउने सक्ने विश्लेषण गरिरहेका छन्। उनी कतै मधेस केन्द्रित दल फोरम वा राजपासँग मिल्ने त होइन भन्ने अनुमान पनि धेरैको छ।
‘राजनीतिक सहमतिपछि राउतसहित भएर संगठनका मुख्य व्यक्ति र शुभचिन्तकसमक्ष समीक्षा बैठक भयो,’ गठबन्धनका सहसंयोजक कैलाश महतोले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अब सरकारसँग भएको ११ बुँदे सहमतिमै टेकेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ। हामी केही दिनमै औपचारिक बैठक गर्ने तयारीमा छौं।’
राउत शनिबार काठमाडौंबाट मधेस झरे पनि कहाँ गए भन्ने टुंगो लागेको छैन। यस्तै उनले अबको रणनीति तय गर्न कहाँ बैठक राख्छन् भन्ने विषय अन्योलमै छ। पाँच महिनापहिला पक्राउ पर्नुअघि राउत जनकपुरमा बस्दै आएका थिए।
०६९ जेठमा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेस छुट्टै राष्ट्र बनाउने भन्दै राजनीति सुरु गरेका राउतले साढे ६ वर्षपछि शुक्रबार काठमाडौंमै सरकारसँग सहमति गरेका हुन्।
राउत मूलधारको राजनीतिमा कसरी र कुन स्वरूपमा आउने हुन् भन्नेबारे सबैको चासो छ। राजपा र फोरमले राउतलाई हर्ने दृष्टिकोण पनि त्यसमा निर्भर गर्छ। ‘सरकारसँग भएको सहमति विश्लेषण गर्दै संगठन कसरी बनाउनेमै राउत, हामी र संगठन केन्द्रित रहनेछ,’ गठबन्धनका सहसंयोजक महतोले भने, ‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संगठन हो। आवश्यकताअनुसारको संरचनामा जाने हाम्रो सुरुदेखिकै योजना हो।’ विभिन्न अडकलबाजी भए पनि गठबन्धनले अबको यात्राबारे कुनै टुंगो लगाइसकेको छैन।
राउत नेकपामा प्रवेश गर्ने हल्ला निराधार रहेको सहसंयोजक महतोले बताए। ‘यो हामीलाई बदनाम गर्ने उदेश्यले प्रचार गर्न खोजिएको हो। हाम्रो आगामी यात्राबारे केही दिनमै टुंगो लाग्नेछ।’ राउतको नेतृत्व गठबन्धनको पाँच सदस्यीय तदर्थ समिति छ। संयोजक राउत र सहसंयोजक महतो हुन्। यस्तै अब्दुल खाण राष्ट्रिय प्रवक्ता, चन्दन सिंह सहजकर्ता र दीपक साह कोष–संयोजक छन्।
केडिया अपहरण काण्डमा प्रहरीले पनि ३० लाख लिएको दाबी